ချက်တင်မှာ ကိုယ်ကအက်လို.သူကပြန်ဆက်လာရင် ယဉ်ကျေးကြရအောင် | Mandalaygazette's Weblog
Drama, Essays.., Other - Non Channelized May 25, 2010 Comments: 7
Tagged: ကိုပေါက်လက်ဆောင် အတွေးပါးပါးလေး
ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲစဉ် များကို မြေနီကုန်းရှိ LED ရုပ်သံ စက်တွင် တိုက်ရိုက် ပြသမည် →
7 thoughts on “ချက်တင်မှာ ကိုယ်ကအက်လို.သူကပြန်ဆက်လာရင် ယဉ်ကျေးကြရအောင်”
moethiha May 26, 2010 at 3:14 am Reply
char too lan September 23, 2010 at 10:27 am Reply
အလုပ်မအားလို့ ပြန်မပြောမိရင်လဲ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းတွေပြောဆဲသွားသေးတယ်
ဟိုတလောက ကိုယ့်ကိုအက်လို့ လက်ခံမိပါတယ်မြန်မာလိုပဲ “ဟိုင်း” နေတော့တာပဲ
“ဟေ့ပြန်မပြောဘူးလား” Englishလဲမရ Myanglish လိုလဲမသိနဲ့ “မြန်မာလိုပြောပါဟ” ဆိုတာလဲပါသေးတယ်
အလုပ်များနေတဲ့ကြားကပဲ “ဘယ်သူပါလဲ” လို့ မေးလိုက်တော့
ကျနော်လဲစိတ်တိုတာနဲ့ “ဘယ်ခွေးမှ online မတက်ဘူး” လို့ ဆဲမိလိုက်တယ်ဗျာ……..
PHYOGYI86 September 23, 2010 at 11:56 am Reply
online မှာကယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေများသလို မိုက်ရိုင်းတဲ့သူတွေလဲ တစ်ပုံကြီးပါပဲ …. တစ်ချို့ရှိသေးတယ်
မိန်းကလေးဆိုတာသိတာနဲ့ body size ကိုမေးတာနဲ့ Sex အကြောင်းတွေလာပြောနေတာနဲ့ ဘာတွေမှန်းကို မသိပါဘူး …. ဒီလိုစကားတွေစလာရင် တော့ block လုပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ … ဆက်ပြောနေရင် မလိုလားအပ်တဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ပါတယ် အခု online ကလူတော်တော်များများက တစ်ပါးသူရဲ့ personal ရေးရာထိခိုက်မှာကို ထည့်မစဉ်းစား ပေးကြဘဲ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကခံစားချက်တွေကိုပဲ ဦးစားပေးကြတာများလွန်းနေကြတယ် ….
thethtet87 September 28, 2010 at 4:12 am Reply
ကိုပေါက်(မန္တလေး) June 22, 2012 at 5:01 pm Reply
ဒီပိုစ်လေးက ကျနော်စာရေးစက တင်ထားတဲ့ပိုစ်လေးပါ။
ဒါပေမယ့် မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်ဖြစ်အောင်လို့။
အခုရွာထဲက စည်ကားတော့ သစ်သစ်ဟောင်းဟောင်း ကော်မင်းရဘို့မရှား။.
ကျနော်တို့စာရေးစက ကော်မင်းအင်မတန်ရခဲတာကို သိစေချင်လို့ပါ။
မွန်မွန် June 22, 2012 at 5:57 pm Reply
ကိုယ်ကပဲ အသက်ကြီးလားလို့လားမသိဘူး…ချက်တင်ထိုင်တာကို သိပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ အခုတော့ အကောင့်ထဲမှာ သိတဲ့သူတွေကိုပဲ rename လုပ်ပြီး မသိရင် ပြန် block လိုက်တာ များတယ်။ ur asl plz ဆိုတာနဲ့ကို block ပြီးသားပဲ။ တစ်ဖက်သတ်ဆန်သလား မသိပေမယ့် မပြောချင်တော့ဘူး။ ပြောကြည့်လိုက်တယ်။ ဆွေးနွေးလို့အဆင်ပြေတယ်၊ အကျိုးရှိမယ့် စကားတွေပဲ ပြောဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ခင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ သူကျူ၊ ကိုယ်ကျူ၊ အပြန်အလှန်ကျူကြရင်းနဲ့ အပြင်မှာပါ ဇာတ်လမ်းတွေဆက်ရှုပ်တော့ အွန်လိုင်းကပဲ နာမည်ဆိုးထွက်တော့တာပေါ့။ သုံးတတ်ရင် ပညာတွေအများကြီးရပါတယ်။
water-melon June 22, 2012 at 5:59 pm Reply
ကိုယ်ကလက်ခံတော့လည်း အက်တဲ့သူတွေက စကားတွေကရင့်တယ်ဗျာ